निजी क्षेत्रमा पहिलोपटक स्टार अस्पताललाई कोरोना परीक्षण अनुमति, हजार नमूना परीक्षण गर्नसक्ने – Health Post Nepal
निजी क्षेत्रमा पहिलोपटक स्टार अस्पताललाई कोरोना परीक्षण अनुमति, हजार नमूना परीक्षण गर्नसक्ने
२०७७ असार १५ गते १४:२५
सरकार निजी क्षेत्रमा पहिलोपटक सानेपास्थित स्टार अस्पताललाई आरटी पिसिआरविधिबाट कोरोना परीक्षण अनुमति दिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको प्राविधिक टोलीको मूल्यांकन रिपोर्टका आधारमा पहिलो अनुमति दिइएको हो । अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक डा. शैल रुपाखेतीले प्रमाणपत्रसमेत हात परिसकेको बताए ।
अस्पतालले वायोसेफ्टीका आधारमा पनि अस्पतालभन्दा बेग्लै भवन र अन्य सुरक्षामापदण्ड पुरा गरेर प्रयोगशाला बनाएको छ । तीनवटा पिसिआर मेशिन रहेको प्रयोगशालाबाट २४सैं घण्टा सेवा दिनसकिने र दैनिक न्युनतम १ हजार नमुना परीक्षणको क्षमता रहेको डा. रुपाखेतीले जानकारी दिए ।
रोटरी इन्टरनेशनलसँग सहकार्य गर्दै आएको अस्पतालका २ मेसिन रोटरीले उपलब्ध गराएको र एउटा स्टार ग्रुपको कलेज अफ वायोमेडिकलको हो । अनुमति पाएको निजी प्रयोगशालाले पनि अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको नमूना मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने र सरकारले नै भुक्तानी दिन्छ।
डा. रुपाखेतीले भने, सबै सेवा सरकारी नियमनअनुसार नै चल्ने भएकोले कम्तिमा अस्पतालमा भर्ना भएका विरामी अन्य रोगका उपचार प्रयोजनाका लागि भने पनि परीक्षण खुल्ला गरिए सहज हुने बताए । ‘सरकारले तोकेको शुल्कमा निजी परीक्षण गराउँन चाहाने र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको मात्रै परीक्षण गर्न दिने हो भने, ननकोभिड बिरामीको उपचार सहज हुन्थ्र्यो’ उनले भने ।